Dhageyso: K/galbeed Oo Hub Ku Wareejisay Mukhtaar Roobow – Goobjoog News
Maamulka K/galbeed ayaa sheegay in hub ay ku wareejiyeen Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur sidoo kalena ay ciidan u geeyeen si ay uga difaacaan Al-shabaab.
Afhayeenka maamulkaan Nuuradiin Yuusuf Abukar oo wareysi siiyey Goobjoog News, ayaa sheegay in ciidamada dowladda Federaalka iyo kuwa K/galbeed ay hadda ku sugan yihiin deegaanka Abal ee lagu dagaallamay.
Waxa uu tilmaamay Afhayeenka in ciidamadan Abal gaaray ay lasii dagaallami doonaan Al-shabaab, ayna tagi doonaan deegaanno hor leh, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Al-shabaab ayuu sheegay in la gaaray waqtigii lasoo afjari lahaa, tanina ay noqon doonto fursaddii ugu dambeysay ee maamulkooda soo marta si ay Al-shabaab uga saaraan goballadooda waa sida uu hadalka u dhigaye.
Halkaan hoose ka dhageysi wareysiga
Waa hadal kuwasho muda maamulada oo dhan waa inay galangal sameeyaan si ay cadwga uga quulaystaan